Ọnwụ COVID-10 nke Russia na Septemba ji okpukpu abụọ karịa ọnụ ọgụgụ gọọmentị gọọmentị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ọnwụ COVID-10 nke Russia na Septemba ji okpukpu abụọ karịa ọnụ ọgụgụ gọọmentị gọọmentị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọnwụ COVID-10 nke Russia na Septemba ji okpukpu abụọ karịa ọnụ ọgụgụ gọọmentị gọọmentị.
E boro gọọmentị Russia ebubo na ọ na-eleda mmetụta nke ọrịa COVID-19 na mba ahụ anya.
Ọnụ ọgụgụ ọnwụ COVID-19 nke Russia fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 450,000 - nke kachasị elu na Europe ugbu a.
N'agbanyeghị arịrịọ sitere n'aka Putin na ohere dị ukwuu nke ọgwụ mgbochi ụlọ, naanị 32% nke ndị Russia na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke.
Moscow mechiri ọrụ ndị na-adịghị mkpa maka ụbọchị 11 na Tọzdee ka obodo na-alụ ọgụ na-emebi nje virus.
Ndị mmadụ 44,265 nwụrụ na COVID-19 na Russia na Septemba, dịka kwuru Rosstat (Federal Statistics Agency).
Ọnụọgụ ahụ ka dara ndekọ Russia kwa ọnwa nke ihe karịrị ọnwụ coronavirus 50,000 na July, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke atụmatụ gọọmentị Russia.
Otu gọọmentị gọọmentị kwuru na Russia hụrụ ọnwụ 24,031 na Septemba.
Ọnụọgụ ọhụrụ na-ebute ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ coronavirus na Russia ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 450,000, ọnụ ọgụgụ kasị elu na Europe.
E boro gọọmentị Russia ebubo iweda mmetụta nke ọrịa COVID-19 na mba ahụ na ọnụ ọgụgụ Rosstat - ewepụtara na Fraịde - sere onyinyo gbara ọchịchịrị karịa ka ọnụ ọgụgụ gọọmentị na-atụ aro.
Ọnụ ọgụgụ gọọmentị gọọmentị Russia na-eburu n'uche naanị ọnwụ ebe nje hibere nje dị ka isi ihe kpatara ọnwụ mgbe nyochachara.
Rosstat, agbanyeghị, na-ebipụta ọnụọgụ n'okpuru nkọwa sara mbara maka ọnwụ metụtara nje a.
Russia bụ obodo ọrịa na-efe efe kacha sie ike na Europe, ebe ndị ọchịchị na-agbasi mbọ ike igbochi echiche mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi.
N'agbanyeghị arịrịọ Onye isi ala Russia Putin na nnweta jabs nke ụlọ, naanị 32% nke ndị Russia na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke.
Moscow mechie ọrụ ndị na-adịghị mkpa maka ụbọchị 11 na Tọzdee ka obodo ahụ na-alụ ọgụ na-emebi nje virus, nke ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi dị ala na-ebute.
Russia dekọrọ ọnwụ 1,163 COVID-19 ụnyaahụ.
Putin enyela iwu ka ezumike izu a na-akwụ ụgwọ na mba niile (iji zere iji okwu 'mkpọchi' na-ewu ewu) malite na Satọde na mbọ iji gbochie mgbasa nke nje a.